Bluto - Gpedia, Your Encyclopedia
(Waxaa laga soo toosiyay Bluto)
Bluto (; ; ) waa meere yar oo ka samaysan dhagaxaan iyo baraf oo ku yaala cidhifka Bahda Midaysay Qoraxdu. Bluto waa meeraha tobanaad (10) ee ugu cufka iyo mugga weyn Bahda Midaysay Qoraxdu, sidoo kale waa 1/6 xajmiga dayaxa dhulka.
Meerahani wuxuu u jiraa qoraxda masaafo lagu qiyaaso 4.4 - 7.4 bilyan kilomitir, waxayna ku qaadataa ilaa 49 sanno in uu hal mar qoraxda ku wareego. Taas micnaheedu waa halka sanno ee Bluto wuxuu u dhigmaa 49 sanno dhulka.
Meerehan waxa la helay sanadku markuu ahaa 1930kii, isla markaana lagu daray tirada Bahda Midaysay Qoraxdu.
Meeraha Bluto wuxuu leeyahay shan (5) dayax oo kala ah:
Charon oo ah dayaxa ugu weeyn kaas oo le'eg kala badh xajmiga Bluto.
Tirada Dayax ee Bluto
Buluuto : Clyde William Tombaugh, 1930.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Buluuto&oldid=208198"